7 हायरिंग ट्रेन्ड्स जुन २०२१ मा भर्तीलाई आकार दिनेछ - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र बी २ बी बजार समाचार
सम्पादकको पिक 8 सक्छ, 20216सक्छ, 2021 अमेलिया एम्मा अरबी फ्रीलान्स, B2B, शुरुआतीहरूको लागि सर्वश्रेष्ठ फ्रिल्यान्स वेबसाइटहरू, ब्लग, व्यापार, चीनियाँ स्वतन्त्रता, सम्पादकको पिक, FGG कम लागत बजार, फ्रीलान्स ग्लोबल गिग (FGG) कम लागत बजार, फ्रेन्च फ्रीलान्स गिग, ग्लोबल थोक अनलाइन, हिन्दी फ्रिल्यान्स गिग्स, इन्डोनेसिया फ्रीलान्स गिग्स, अनलाइन थोक र B2B, अनलाइन थोक र B2B बजार, पोर्तुगाली फ्रीलान्स गिग्स, रसियन फ्रीलान्स गिग्स, B2B अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, ग्लोब किन्नुहोस्, थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, स्पेनिश फ्रीलान्स गिग, प्रविधि, थोक, थोक - B2B, थोक र B2B बजार, थोक बजार अनलाइन खरीद र बिक्री
एआई उपकरणले अब विश्वभरि हायरिंग प्रक्रियाहरूलाई पुन: परिभाषित गर्दैछ।
संगठनहरू अब आवेदकको स्थान पछाडि समात्दैनन्; तिनीहरू दुनिया मा कहीं बाट किराया।
सफ्ट कौशल लेबर बजारमा अधिकतम कौशल अन्तरको लागि बनाउँछ।
जबकि चीज अलि प्रतिकूल लाग्न सक्छ, सबै हराएको छैन। तपाइँको श्रम परिदृश्य आवश्यकताहरु को बराबरी हुन र परिवर्तनहरु लाई अनुकूल गर्न को लागी, २०२१ मा सबै भन्दा बढि भर्ती प्रवृत्ति संग परिचित हुनु आवश्यक छ।
यहाँ tre प्रवृत्ति छन् जुन २०२१ मा भर्तीलाई आकार दिन जारी राख्नेछ:
मानव जस्तो नभई, मेशिनहरू विश्वास, पूर्वाग्रह वा प्राथमिकताहरूले रंगीन गर्दैनन्।
१. स्वचालित रोजगारका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग
सबै उद्योगहरूमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको एकीकरणको साथ, सेवाहरू डेलिभर हुने र पहुँच गर्ने तरिकाले ठूलो रूपान्तरण पार गरेको छ। समान भर्तीहरूको लागि जान्छ; महामारीले स्वचालनमा भर्ती प्रक्रियाहरुलाई धक्का दियो। भाडामा स्वचालन मुख्य रूपमा निर्भर गर्दछ मेशिन सिकाइ र डाटा एनालिटिक्स। एआई उपकरणको प्रयोगले भाँडामा मानव पक्षपात कम गर्दछ र कार्यस्थलहरुमा विविधता बढावा दिन्छ। मानव जस्तो नभई, मेशिनहरू विश्वास, पूर्वाग्रह वा प्राथमिकताहरूले रंगीन गर्दैनन्।
एक पोस्ट कोविड अर्थतन्त्र निश्चित रूपले प्रतिस्पर्धी हो। यसको मतलव अधिक व्यक्तिले थोरै स्लटहरूको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ, जसले फलस्वरूप आवेदक पोखरीबाट उत्तम उम्मेदवारहरू छनौट गर्दछ। भर्ती कुराकानीबाट प्रोफाइल स्क्रिनि to सम्म, एआई उपकरणले अब विश्वभरि हायरिंग प्रक्रियाहरूलाई पुन: परिभाषित गर्दैछ। कुराकानीले मानकको प्रश्नहरूको उत्तरबाट उम्मेदवारको व्यक्तित्व विशेषताहरूको विश्लेषण गर्न सक्दछ। मेशिन शिक्षा पनि निर्णय लिनको लागि लाभान्वित छ; एआईले अब हजारौं प्रोफाइलहरूको समीक्षा गरेर उम्मेदवारहरूलाई दर्जा दिन सक्छ र यसरी समय बचत गर्दछ।
१. रिमोट हायरिंग
सामाजिक दूरी र COVID-१ cases घटनामा भएको वृद्धिका साथ, आज विश्वव्यापी कार्यबल शारीरिक रूपमा भन्दा पनि झन्डै जोडिएको छ। प्रायः संगठनहरूले यस तथ्यका साथ मेलमिलाप गरे कि उनीहरूले आफ्ना सबै कर्मचारीहरूलाई कार्यालयबाट काम गर्न आवश्यक पर्दैन। भर्तीमा पनि त्यस्तै हुन्छ। आमने सामने साक्षात्कार अब आदर्श छैन; भर्तीकर्ताहरू अब उम्मेद्वारहरूसँग कनेक्ट हुन भर्चुअल उपकरणहरूमा टाँसिए। संगठनहरू अब आवेदकको स्थान पछाडि समात्दैनन्; तिनीहरू विश्वका कुनै पनि स्थानबाट भाडा लिन्छन्, उम्मेदवारलाई घरबाट काम गर्न आवश्यक पूर्वाधार हुन्छ।
The. डिजिटली लिटरेटको लागि प्राथमिकता
लिंक्डइन न्यूजका वरिष्ठ सम्पादक एन्ड्र्यू सीमेनका अनुसार, आगामी years बर्षमा त्यहाँ हुनेछ १ 150० थप नयाँ रोजगारी प्रविधि क्षेत्र मा। लगभग कुनै शारीरिक अन्तर्क्रियाको साथ, संगठनहरूले लचिलो रहनको लागि उनीहरूको डिजिटल एजेन्डालाई राम्रो गरेका छन्, जसले डिजिटल साक्षरतालाई समयको आवश्यकता बनाउँछ। के आवेदक साक्षात्कारमा भाग लिन सक्छन्? यदि तिनीहरूले परीक्षण क्र्याक गरे, के तिनीहरूसँग समस्याहरू बिना घरबाट काम गर्नको लागि सही सुविधा छ? के तिनीहरूको इन्टर्नेट जडानसँग द्रुत-गति काम गर्ने वातावरणसँग व्यवहार गर्न पर्याप्त वेग छ? यी प्रश्नहरू आवेदकहरूसँग आउने स्किलसेट जत्तिकै प्रासंगिक छन्।
Soft. सफ्ट कौशलका लागि माग
सफ्ट कौशल लेबर बजारमा अधिकतम कौशल अन्तरको लागि बनाउँछ। सधैं विकास भइरहेको माग र चलनहरूको साथ, रोजगारदाताहरूले अब यो चुनौतीको वातावरणमा फस्टाउन लाग्ने उम्मेदवारहरू छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन आवश्यक छ। रोजगार बजारमा केहि सब भन्दा आकर्षक नरम सीपहरूले सहयोग कौशल, समस्या समाधान गर्ने कौशल, र प्रभावकारी सञ्चार कौशल समावेश गर्दछ। महामारीले हामीलाई लचिलोपन, दृढ संकल्प र लचकता पनि सिकायो; रोजगारदाताहरूले अब आवेदकहरूको खोजी गरिरहेका छन् जसले कामका वातावरणहरूमा यी गुणहरू लागू गर्न सक्दछन्।
V. भर्चुअल हायरि Tools उपकरणहरूको प्रयोग
भर्चुअल हायरि tools उपकरणले भर्तीकर्ताहरुलाई सामाजिक दूरी दूरीको प्रोटोकल नतोडेर भर्ती प्रक्रिया पूरा गर्न मद्दत गर्दछ। सोर्सिंग ट्यालेन्टबाट सही उम्मेदवारहरू छनौट गर्न, यी उपकरणहरूले समय बचत गर्दछ र संगठनहरूलाई लागत प्रभावी रूपमा भर्ती प्रक्रियाहरू सञ्चालन गर्न मद्दत गर्दछ।
साइकोमेट्रिक परीक्षणहरू अब भर्ती उपकरणको रूपमा प्रयोग गरिन्छ कसरी बुझ्न सकिन्छ कि उम्मेदवारले कसरी टाढाको कार्य र सामाजिक दूरीसँग सामना गर्दछ। उनीहरूले रोजगारदातालाई उम्मेदवारहरूको व्यक्तित्व लक्षणहरूको विश्लेषण गर्न मद्दत गर्छन् जसले गर्दा उनीहरूसँग राम्रोसँग सहानुभूति देखाउन सक्दछ।
आवेदक ट्र्याकिंग प्रणाली, स्क्रीनिंग बट, र क्लाउड-आधारित संचार अनुप्रयोगहरू केहि सामान्य भर्चुअल हायरिंग उपकरणहरू हुन्। तिनीहरूले अनबोर्डिंग सरल र उम्मेदवारहरूको लागि एक सम्पर्क रहित, कागज रहित, अझै सहज अनुभव।
Job 55 प्रतिशत रोजगार खोज्नेहरू विश्वास गर्छन् कि सोशल मिडिया उनीहरूको रोजगारीको खोजीका लागि उत्तम साधन हो।
Social. भर्ती उपकरणको रूपमा सामाजिक मिडियाको प्रयोग
55 प्रतिशत रोजगारी खोजी गर्नेहरूको विश्वास छ कि सोशल मिडिया उनीहरूको रोजगारीको खोजीका लागि उत्तम साधन हो। 84 प्रतिशत भर्तीकर्ताहरूले भाडामा लिनको लागि सामाजिक मिडिया ह्यान्डलहरू प्रयोग गर्छन्। धेरै संस्थाले लोकप्रिय सोशल नेटवर्कि sites साइटहरू जस्तै फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, र लिंक्डइन खोल्न को लागी लाभ उठाउँछन्। बिभिन्न रोजगार स्थानहरूको विस्तृत विवरणको साथ, यी वेबसाइटहरू उपयोगी र अवसरहरू सहित भरिएका छन्। तिनीहरू अधिक एक्सपोजर प्राप्त गर्न ह्यासट्याग र विज्ञापन प्रयोग गर्दछन्। लिंक्डइन अझै पनि एक सबैभन्दा लोकप्रिय र विश्वस्त पेशेवर नेटवर्किworking साइटहरू हुन जारी छ जहाँ भर्तीकर्ताहरूले सीधा प्रतिभासँग कुराकानी गर्न सक्दछन्।
T. प्रतिभा पोखरीको मर्मतसम्भार
छाडा मा महामारी संग, संगठनहरु आफ्नो प्रतिभा अधिग्रहण रणनीति गत वर्ष सुधार गर्न बाध्य गरियो। अर्डेन्ट पार्टनर्स द्वारा गरिएको एक अध्ययनले भन्छ कि व्यवसायको percent० प्रतिशत २०२० मा प्राथमिकतामा प्रतिभा पोखरी मर्मत सम्भार। एक ट्यालेन्ट पूल भनेको डाटाबेस हो जसले शीर्ष काम आवेदकहरूको सूची राख्छ, खिसी गरिएको उम्मेदवारहरू, सन्दर्भित उम्मेदवारहरू, उम्मेदवारहरू जसले पूलमा सम्मिलित हुन स्वयम्सेवा गर्छन्, र यस्तै।
यद्यपि ट्यालेन्ट पूल महामारीको वरिपरि भएको थियो, तर उनीहरूले पोष्ट-कोभीड कार्य बजारमा अधिक प्रासंगिकता भेट्टाए; कम्पनीहरू बाहिरी workforces मा निर्भर गर्दछ ती भन्दा बढी उनीहरूको इन-हाउस ट्यालेन्टमा निर्भर छन्। २०२१ ले कम्पनीहरूले प्रतिभा पूलहरू प्रयोग गर्न सजिलो भाँडामा प्रयोग गर्नका साथै प्रतिभासँग संलग्न हुन चाहेको छ जुन कार्यबलमा सामेल हुन इच्छुक छन्।
२०२१ मा कामको शिकार डरलाग्दो लाग्न सक्छ, तर चाल यो महामारी तपाईलाई चीजहरु को उज्यालो पक्ष मा हेर्न रोक्न छैन। मात्राबाट गुणस्तरमा एक प्रेरणादायी बदलाव आएको छ; कामदारहरूले अब उनीहरूको to देखि routine दिनचर्याबाट स्वतन्त्र महसुस गर्छन् र उनीहरूले राखेको घण्टा भन्दा काम पूरा गर्नमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्छन्। प्रवृत्तिसँगसँगै रहनुहोस् र परिवर्तनहरूको लागि खुला रहनाले तपाईंलाई हालको श्रम बजारको गतिशीलता अँगाल्न मद्दत गर्दछ।
कृत्रिम खुफिया सांप्रदायिक समाचार ग्रेक्याम्पस मेशिन सिकाइ सामाजिक संजाल सामाजिक संजाल सोफ्ट्सकिल्स रुझान
अमेलिया एम्मा ग्रेय्याम्पसमा सामग्री प्रबन्धक हो